allsanaag.com - Biixi oo Baakorad iyo Budh lala dhacay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3210	Days	17	Hours	42	Minutes	51	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Biixi oo Baakorad iyo Budh lala dhacay
Written by khalid	(Daawo) Guusha yaa leh Samaroon baa leh, Saylac yaa leh Samaroon baa leh.
Baabuurta aad arki doontaan Cabdiweaabe iyo Biixi ayaa ku jira iyaga oo bahdilan
Bulshada Ku nool Jubada hoose waxay u istaageen xaqii ay ku lahaayeen dawlada Federaalka Soomaaliya, halka bulshada ku nool gobolka Awdal ay ka soo baacsadeen gobolkooda Muuse Biixi iyo Cabdiwaraabe oo doonayey in degmada Saylac Hadyad u siiyaan kaligii taliye Cumar Geele. Hadaba Bulshada ku nool Gobolada Sanaag iyo Sool goorma ayeey ogaan doonaan in SNM tahay maato awood badan lahayn oo ay ka saari doonaan Ceerigaabo iyo Lascaanood.